၃၂နှဈလုံးပဈထားခဲ့ပွီး သားလေးရဲ့နောကျဆုံးအခြိနျရောကျမှ တိုးတိုးတိတျတိတျဖုနျးဆကျစုံစမျးလာတာတှကေို နာကညျြးစှာရငျဖှငျ့လာတဲ့ ရမှေနျရဲ့မိခငျ – Maythadin
May Thadin | June 27, 2021 | Celebrity | No Comments
အမိုကျစားသီခငျြးကောငျးလေးတှနေဲ့အနုပညာလောကမှအောငျမွငျမှုတှအေခိုငျအမာနဲ့ အားလုံးရဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုတှကေိုကို အပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့ Idiots အဖှဲ့ရဲ့ ပငျတိုငျအဆိုတျောရမှေနျကတော့ အခုဆိုရငျ ဘဝတဈပါးကို ကူးပွောငျးကှယျလှနျသှားခဲ့ပါပွီနျော
မိသားစုနဲ့အဝေးတဈနရောမှာ ရှောငျတိမျးနရေငျး အစာအိမျသှေးကွောပေါကျပွီး ရုတျတရကျကှယျလှနျသှားခဲ့တဲ့ ရမှေနျအတှကျ အားလုံးက ယူကွုံးမရ ခံစားနရေသလို ကာယကံရှငျမိသားစုဝငျတှအေတှကျကတော့ တကယျကို ဖွမေဆညျနိုငျတဲ့ ကွကှေဲစရာဆုံးရှုံးမှုပါပဲ
အသကျတဈနှဈအရှယျကတညျးကအရှယျရောကျတဲ့အခြိနျအထိ ဖခငျမရှိဘဲ အမနေဲ့ ညီမလေးကို စောငျ့ရှောကိုယျ့အားကိုယျကိုး ရုနျးကနျလာခဲ့တဲ့ ရမှေနျအတှကျ မိခငျဖွဈသူက ရငျနာစှာနဲ့ စာလေးရေးသားလာခဲ့ပါတယျ
(၃၂)နှဈလုံး စှနျ့ပဈထားခဲ့ပွီး ကှယျလှနျသှားတဲ့ နောကျဆုံးအခြိနျရောကျမှ တိုးတိုးတိတျတိတျဖုနျးဆကျစုံစမျးနတေဲ့ ရမှေနျဖခငျရဲ့လုပျရပျတှကွေောငျ့ သားလေးအတှကျ ရငျနာရတာတှကေို နာကညျြးစှာ ရငျဖှငျ့ပွောပွလာတာဖွဈပါတယျ
“၃၂နှဈလုံး ရကျရကျစကျစကျလူမဆနျစှာ စှနျ့ပဈခဲ့ပွီး
And. . .Fu c k u…” ဆိုပွီး အဆိုတျောဒျေါခငျမွတျမှနျက သူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာကနေ ရေးသားပွောပွထားတာပါ.
လောကဓံရဲ့ ရိုကျနှကျမှုဒဏျတှကေို ရငျဆိုငျခံစားခဲ့ရတဲ့ ရမှေနျတို့မောငျနှမနှဈယောကျအတှကျ ပရိသတျတှစေိတျမကောငျးဖွဈနကွေရသလို မိခငျဖွဈသူကိုလညျး အားပေးစကားတှေ ပွောထားကွတာ တှရေ့ပါတယျ
အမိုက်စားသီချင်းကောင်းလေးတွေနဲ့အနုပညာလောကမှအောင်မြင်မှုတွေအခိုင်အမာနဲ့ အားလုံးရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ Idiots အဖွဲ့ရဲ့ ပင်တိုင်အဆိုတော်ရေမွန်ကတော့ အခုဆိုရင် ဘဝတစ်ပါးကို ကူးပြောင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီနော်.
မိသားစုနဲ့အဝေးတစ်နေရာမှာ ရှောင်တိမ်းနေရင်း အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်ပြီး ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ ရေမွန်အတွက် အားလုံးက ယူကြုံးမရ ခံစားနေရသလို ကာယကံရှင်မိသားစုဝင်တွေအတွက်ကတော့ တကယ်ကို ဖြေမဆည်နိုင်တဲ့ ကြေကွဲစရာဆုံးရှုံးမှုပါပဲ
အသက်တစ်နှစ်အရွယ်ကတည်းကအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်အထိ ဖခင်မရှိဘဲ အမေနဲ့ ညီမလေးကို စောင့်ရှောကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ရုန်းကန်လာခဲ့တဲ့ ရေမွန်အတွက် မိခင်ဖြစ်သူက ရင်နာစွာနဲ့ စာလေးရေးသားလာခဲ့ပါတယ်
(၃၂)နှစ်လုံး စွန့်ပစ်ထားခဲ့ပြီး ကွယ်လွန်သွားတဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်မှ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ဖုန်းဆက်စုံစမ်းနေတဲ့ ရေမွန်ဖခင်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့် သားလေးအတွက် ရင်နာရတာတွေကို နာကျည်းစွာ ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်
“၃၂နှစ်လုံး ရက်ရက်စက်စက်လူမဆန်စွာ စွန့်ပစ်ခဲ့ပြီး
And. . .Fu c k u…” ဆိုပြီး အဆိုတော်ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်က သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေ ရေးသားပြောပြထားတာပါ.
လောကဓံရဲ့ ရိုက်နှက်မှုဒဏ်တွေကို ရင်ဆိုင်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ရေမွန်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်အတွက် ပရိသတ်တွေ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရသလို မိခင်ဖြစ်သူကိုလည်း အားပေးစကားတွေ ပြောထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်